My Blog Archives ⋆ Z-illumination Technology Co.,Ltd
Z-illumination Technology Co.,Ltd
Category: My Blog (လုပ်ငန်းသုံး Laptop ဘယ်လိုဝယ်ကြမလဲ)?
By zippo |
လုပ်ငန်းသုံး Laptop ဆိုတာ ကွန်ပျူတာဈေးကွက်မှာ တခြား Laptop တွေ နဲ့ သီးသန့်ကြီး လုံးဝကွဲထွက်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုး Quality အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။ ထုတ်တဲ့ Company နဲ့ size ပေါ်မူတည်ပြီး Ultra Book, Note Book, Chrome Book, Pro Book စသဖြင့်နာမည်အမျိုးမျိုးကွဲပါလိမ့်မယ်။
Microsoft Server 2012 R2 DHCP Installation Part 2
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က Microsoft Server 2012 R2 DHCP Install လုပ်ပုံလုပ်နည်း Part 1 ကို ဝေမျှထားပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်ကတော့ Microsoft Server 2012 R2 DHCP Install လုပ်ပုံလုပ်နည်း Part2ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ပုံတစ်ပုံချင်းဆီကိုလည်း နှိပ်ကြည့်ပေးပါ။ ရှင်းပြထားပါတယ်။
Microsoft Server 2012 R2 DHCP Install လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ပုံတွေက အရမ်းများနေလို့ Part 1 နှင့် Part2ဆိုပြီး တင်ထားပေးပါမယ်။ ပုံတစ်ပုံချင်းဆီကိုလည်း နှိပ်ကြည့်ပေးပါ။ ရှင်းပြထားပါတယ်။ အခုအပိုင်းက Part 1 လုပ်ပုံလုပ်နည်းပါ။
Microsoft Server 2012 R2 DNS Installation
Microsoft Server 2012 R2 DNS Install လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ပုံတစ်ပုံချင်းဆီကိုလည်း နှိပ်ကြည့်ပေးပါ။ ရှင်းပြထားပါတယ်။
Microsoft Server 2012 R2 Setup
Microsoft Server 2012 R2 Install ပြီးသွားတာနဲ့ Setup လုပ်ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Microsoft Server 2012 R2 Essential Setup လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ပုံတစ်ပုံချင်းဆီကို နှိပ်ကြည့်ပေးပါ။ ရှင်းပြထားပါတယ်။
[English] Our company gives many kinds of services to connect Internet and Network within home or residence and company by using network cable and wireless technology.
အားလုံးကို Computer Virus က ဘယ်လိုမျိုးခေါ်တာလဲ ဘယ်လိုမျိုးဆိုရင် Computer မှာ Virus ရှိနေပြီလဲ သိစေချင်လို့ ပြန်လည် Share ပေးလိုက်ပါတယ်။ What is Spyware? Spyware is software that is usually installed on your computer without your expressed permission, which often gathers information found on your computer without your knowledge and either stores it or sends it back to someone else. Certain forms […]
Network ကနေ Windows ကို Install လုပ်ချင်တဲ့ လူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အကျိုးကျေးဇူးက တစ်ခါပဲ Win PE ကို တည်ဆောက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဘယ်လောက်အရေအတွက်ဖြစ်ဖြစ် Network ကနေ install လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=44RQGA2To5E
Q: ဘာကြောင့် ငါတို့ ရုံးမှာ Server တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်တာလဲ၊ Active Directory လိုအပ်တာလဲ။ A: ရုံးတွေရဲ့ Computer တွေ၊ အဖွဲ့ အစည်းတွေရဲ့ Computer တွေမှာ သုံးနေတဲ့ Data တွေ၊ Information တွေ၊ User တွေကို ထိန်းချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Active Directory Server တည်ဆောက်သင့်ပါတယ်။ ရုံးရဲ့ Security လည်း ပိုပြီး ကောင်းသွားပါတယ်။ Active Directory ကို ပိုပြီး နားလည်အောင် အောက်မှာ ရှင်းပြထားပါတယ်။
Copyright © Z-illumination Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.